Home News Madaxweyne Xaaf”Ciidamada Ahlusunna Iyo galmudug waan isku dhafeeynaa si ay wadajir ugu...
Madaxweyne Xaaf”Ciidamada Ahlusunna Iyo galmudug waan isku dhafeeynaa si ay wadajir ugu dagaalamaan”
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf) ayaa sheegay dhowaan inuu bilaabanayo qorshe la isugu dhafayo Wasiirada, Xildhibaanada iyo Ciidamada labada Maamul ee Galmudug iyo Ahlusuna.
Heshiiskii ay gaareen labada Maamul ayaa qodobadii ku qornaa waxaa ka mid ahaa in heshiiska isku dhafkiisa lagu dhameystiro caasimadda Galmudug ee Dhuusa-mareeb.
Wuxuu sheegay Madaxweyne Xaaf marka hore in ay ka shaqeynayaan sidii la isugu dhafi lahaa labada maamul, kadib loo baahan yahay in la guda galo shaqooyinka kale ee horyaalla Maamulka.
Sidoo kale Madaxweynaha Galmudug ayaa sheegay in ay dhisayaan Dekeda Hobyo, Jidadka magaalooyinka iyo Guryaha kale ee dayacan, si loo gaaro guulo iyo horumaro balaaran.
Hadalkan Hoggaamiyaha Galmudug wuxuu ka sheegay Munaasabad shalay gelinkii dambe lagu qabtay magaalada Dhuusa-mareeb, oo ay kala qeyb galeen Golaha Wasiirada oo uu ugu horeeyo Madaxa Xukuumadda Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf) oo Dhuusa-mareeb ay ugu dambeysay dhammaadkii bishii January ayaa dib ugu laabtay 27-kii bishii Febraayo ee dhowaan dhamaatay.